China FOTON U12D fekitori uye vagadziri | Foton
Foton 12m renji murairidzi ndiko kutaura kukuru kwehunhu, chengetedzo, kuvimbika, kugona kwakanyanya, kugadzirira kumusika zvinoda nehunhu hwayo hwakasimba uye kuona kunoitika.
Kunopindirana Dimension 12000 * 2550 * 3790
Kurambidza Kurema 13T
Kugara Kugona 32 + 1 + 1/49 + 1 + 1
Chimiro chemuviri Monocoque / Semi-monocoque
Wepamusoro Chitarisiko Korona-yakaita serusvingo rwemberi: yakashongedzwa uye ine hunyanzvi dhizaini, ichiratidza hunhu hwayo hunhu; Wepamusoro windshield: inoratidzira 50 degree caster angle yekudzikisa mweya kuramba, kwakakosha mukuchengetedza simba; Rutivi madziro: yakagadziriswa dhizaini ine simba uye ipfupi maficha
Mabhazi eFoton anoenda kuburikidza nekuonekwa kwakasimba kwemotokari uye rollover bvunzo pamusoro pezviuru zana zvemakiromita mune mamiriro emhando dzakasiyana dzemigwagwa uye pasi pemamiriro ekunze akaomarara senge kupisa kwakanyanya, tembiricha yakaderera kana kumanikidza kwakaderera.
Nesimba rakasimba, mabhazi eFoton anomira padivi-on uye nemusoro-pane mabondera pamwe nekudzivirira lateral kupomba. Vasati vapinda mubasa, vanoedzwa zvakanyanya uye kuongororwa.